Accountant | Job in Myanmar ﻿
13.12.2019, Full time , Logistics / Transport
Our Efficient and Energetic staff enable to provide best service to our customers.We handle door to door service pick up order directly from the factory and delivered to the sales floor within given deadlines.Legendary Myanmar Int'l Shipping & Logistics co.,ltd isaprofessional shipping, freight forwarding, moving and relocation service company in Yangon, Myanmar.LMSL provide multi model transportation by air, sea or boarder - trade transportation within Myanmar - Thailand - Lao - China.
- ဘွဲ့ရ (Any graduated)
- LCCI Level3အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
- အင်္ဂလိပ်စကား အသင့်အတင့်ပြောဆိုနိုင်သူ
- Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Work location No.9, Room (A-4), 3rd Floor, Kyaung Street, Myaynigone, Sanchaung Township, Yangon
-ရိုးသား အချိန်လေးစားပြီး စည်းကမ်းရှိသူဖြစ်ရမည် -နယ် ပုဂံ မန္တလေး နယ်သို့ မောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် -မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ် အနီးနေထိုင်သူ ဦးစားပေးမည်
Our Efficient and Energetic staff enable to provide best service to our customers.
We handle door to door service pick up order directly from the factory and delivered to the sales floor within given deadlines.
Legendary Myanmar Int'l Shipping & Logistics co.,ltd isaprofessional shipping, freight forwarding, moving and relocation service company in Yangon, Myanmar.
LMSL provide multi model transportation by air, sea or boarder - trade transportation within Myanmar - Thailand - Lao - China.
- ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ပါကင်ထုပ်ပိုးဝန်ထမ်း M (5)
ရုံ့းတွင်းကိစ္စများ၊ရုံးပြင်ပကိစ္စများ ပြုလုပ်ရမည်။ Packing ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သင်ယူလိုသောစိတ်ဓာတ်နှင့် အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	လျှောက်ထားလိုသော ရာထူးအတွက်သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Can use Computer (MS word & Excel) Can also use internet & Email
Inbound Tour Operator Staff M/F (1)
255 Days, Full time , Logistics / Transport
ဘွဲ့ရ(Any Graduated)၊ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Accountant Accountancy Jobs jobless jobsinyangon.com Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Yangon Region 401 Days
Yangon Region 481 Days